Q tshintsha kuyo yag tattoo nokususwa icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname umatshini ixabiso ql-40-icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname ubuhle umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Q switch nd yag tattoo yokukhupha umatshini we-laser ixabiso I-ql-40
Inkqubo yamkela ukubonelelwa nge-laser ka-600W, ukufikelela kumandla ukuya kwi-1200mj. Ekhethekileyo yenzelwe i-8 'yinyani yokuchukumisa umbala wesikrini sokulawula, kulula ukuyisebenzisa. Ukujonga ngokuzenzekelayo ubushushu bamanzi kunye nokuhamba kwamanzi, qinisekisa ukusetyenziswa kokhuseleko komatshini. Ngeengcebiso ezi-3 ze-laser zinokwenza unyango olwahlukileyo lwe tattoo kunye nokususwa kwesilonda esinee-pigment, i-laser toning njalo njalo.
QL-40 sebenzisa Q-switch nd yag laser technology. I-Laser inokufakwa kwi-melanin eluhlaza kunye nomnyama. I-melanin iya kwahlulahlula yaba zizinto ezincinci kakhulu. Zincinci kakhulu ukuba zinokufakwa kwisistim ye-lymphatic system kwaye zikhutshwe emzimbeni. Ngale ndlela i-tattoo okanye ezinye i-pigmentations ziya kususwa ngaphandle kokulimala kwezicubu eziqhelekileyo. Unyango lukhuselekile kwaye lufumaneka ngaphandle kokuphumla okanye icala. Inkqubo yamkele ukubonelelwa nge-laser eyi-600W, ukufikelela kumandla ukuya kwi-1200mj. Ekhethekileyo yenzelwe i-8 'yinyani yokuchukumisa umbala wesikrini sokulawula, kulula ukuyisebenzisa. Ukujonga ngokuzenzekelayo ubushushu bamanzi kunye nokuhamba kwamanzi, qinisekisa ukusetyenziswa kokhuseleko komatshini. Ngeengcebiso ezi-3 ze-laser zinokwenza unyango olwahlukileyo lwe tattoo kunye nokususwa kwesilonda esinee-pigment, i-laser toning njalo njalo.
1. Susa iitatato ezahlukeneyo, umgca wamehlo, brow wamehlo, i-pigmentation.
2. Susa i-chloasma, i-pigment yeminyaka, i-nevus, uphawu lokuzalwa kunye ne-Nevus ye-Ota.
3.Ukuqina kwesikhumba, mhlophe ulusu, ithoni yolusu.
1. Inkqubo yokusebenza kwemisebenzi emininzi: Nika iingcebiso ezi-3 ze-laser: I-532nm yengubo ebomvu neblue, i-1064nm yebala elimnyama nelintsundu, i-1064nm yecarbon yencindi yokugcina ulusu.
2. Kulula ukuyisebenzisa: Bamba irekhodi lokubala elipheleleyo, iplagi kunye nokudlala isixhobo sokudibanisa kulula ukusiguqula. Isalathiso seenjongo ezibomvu sinokuvulwa / sicinywe.
3. Ukusetyenziswa kokhuseleko: I-intshi eyi-8 intshi yangempela yokuchukumisa umbala ngokubuyisela amanzi ngokuzenzekelayo kunye nokucoca ubushushu,
4. Amandla aphezulu: amandla ombane ayi-600 W, i-100-1200mj yokukhutshelwa kokuphuma kwezinto ezinokuhanjiswa, i-1-6 Hz frequency ehlengahlengiswayo
5. Inkqubo yokupholisa kakhulu: iiyure ezisebenzayo ezisebenza ngokuchanekileyo ziyahambelana ngokugqibeleleyo neemfuno zokususa i-pigment.
6. Uqoqosho: umgangatho ophezulu wesibane uqinisekisa i-2,000,000, XNUMX. Uyilo oluphathekayo luqoqosho kuhambo lokuhamba.
I-1064nm, i-532nm, iingcebiso zekhabhoni
I-diode ebomvu i-650nm, kwi / ecinyiwe
ukucoca amanzi ngokuzenzekelayo ukupholisa + ukupholisa komoya
I-230V 60Hz, 110V 50Hz
Izixhobo zokuhombisa ubuhle bemisebenzi yobuso yolusu ikhabhoni yangaphandle ipl rf umatshini we-laser njenge-x3